စစ်မှန်သောမိမိနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – Pann Satt Lann Books
လော့လင်းသည် အမျိုးသားဖြစ်သူနှင့် ရန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး အိမ်မှ ကားမောင်း၍ထွက်လာခဲ့လိုက်၏ “အသက်ရှင်နေရတာ မောလိုက်တာ!” ဟူသည့်စကားသည် လော့လင်း၏ လက်သုံးစကားဖြစ်နေပါပြီ။ ထိုညမှာပင် လော့လင်းသည် မျှော်လင့်မထားဘဲ ထူးဆန်းသောအဘိုးတစ်ဦးနှင့် ဆုံမိသွား၏။ အဘိုးနှင့် ဆုံတွေ့မှုသည် လေ့လင်းအား…
“လူတွေက တကယ်တမ်း ဘာကိုလိုချင်နေကြတာလဲ?”
အစရှိသည့်အကြောင်းအရာများကို စူးစမ်းလေ့လာမှုများ ပြုလာစေကာ ထိုမှတစ်ဆင့် မသိစိတ်အကြောင်း၊ စွမ်းအင်အကြောင်း၊ ဆွဲငင်အားနိယာမအကြောင်းတို့ကို သိရှိလာကာ လူတိုင်းက မိမိ၏ကမ္ဘာငယ်လေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာ၏။ အဘိုး၏လမ်းညွှန်မှုကြောင့် လော့လင်းသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာကာ ပြင်ပအရာများတွင်သာ အပြစ်မြင်နေလေ့ရှိခဲ့ရာမှ မိမိ၏အတွင်းစိတ်ကို အာရုံတိုက်တတ်သည့်သူ ဖြစ်လာ၏။
အရာအားလုံးက ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဖက်သို့ ဦးတည်သွားနေပြီဟု ထင်ရချိန်မှာဘဲ တစ်နေ့တော့ လော့လင်းသည် အလုပ်တွင် သူအယုံကြည်ရဆုံးသူငယ်ချင်း၏ နောက်ကျောဓားထိုးမှုနှင့် အမျိုးသားဖြစ်သူ၏ သစ္စာဖောက်မှုကို ခံလိုက်ရ၏။ အလုပ်၌ အဆင်မပြေမှု၊ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲမှု အစရှိသည်တို့၏ ထိုးနှက်မှုကို လော့လင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါ မည်လော? လော့လင်းဘ၀၏ လမ်းညွှန်ပေးသူဖြစ်သည့်အဘိုးကရော လော့လင်းကို မည်သို့သောလမ်းညွှန်မှုများ ဆက်ပေးမည်နည်း? နာကျင်မှုများမှ လော့လင်းရုန်းထွက်နိုင်ပါမည်လော?…
အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖတ်ရင်းနဲ့ မိမိ၏စိတ်ကိုပါ စိစစ်သွားနိုင်ကာ အဘိုး၏ လမ်းညွှန်မှုများမှတဆင့် မိမိဘ၀အတွက် လိုအပ်သောအဖြေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကောင်းတွေ့ရှိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်နိုင်မိုးစာပေ၊ 2020 မတ်လ၊ (စတုတ္ထ-အကြိမ်)
စစ်မှန်သောမိမိနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု6ရှိပါသည်။
Khine Wai Mon – June 28, 2022
အရမ်းအဖိုးတန်တဲ့စာအုပ်လေးပါ ။ မူလစာရေးသူရော ဘာသာပြန်သူဆရာမကိုရော ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်